IMF ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး သုံးသပ်ချက် စစ်တမ်း
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ တိုးတက်မှုတွေ မြင်နေရတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ စိမ်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ IMF က သတိပေးပါတယ်။
ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၁-ကမ္ဘာနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာ စိမ်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေတာကို IMF ရဲ့ နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဟာ အကျပ်အတည်းတွေ ကြုံခဲ့ရာက ပြန်လည် နာလန်ထူလာနေရုံသာမက ပိုပြီးအားကောင်း လာနေတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို ဦးဆောင်နေတဲ့ အာရှဒေသမှာ ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှုတွေ စီးပွားရေး အင်အားကြီး အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ လောင်စာဆီ ကြီးမြင့်မှု ပြဿနာလို စိမ်ခေါ်မှုတွေလည်း ရှိနေတယ်လို့ သတိပေးထားတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှနဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အခြေအနေ အပေါ် ဆန်းစစ်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုတော့ ဒီတပတ်ရဲ့ စီးပွားရေး ကဏ္ဍမှာ ကိုအောင်လွင်ဦး က စုစည်းတင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဟာ ယေဘုယျအနေနဲ့ ဒီနှစ်နဲ့ ရှေ့လာမယ့်နှစ်တွေမှာ အတော်အသင့် မြင့်မားတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းနဲ့ နာလန်ထူ လာလိမ့်မယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) က ပြောပါတယ်။ ဒါဟာ စီးပွားရေး အားကောင်းလာတဲ့ လက္ခဏာအဖြစ် မြင်နိုင်ပေမဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီလိုတိုးတက်မှုမှာ စိမ်ခေါ်မှုတွေနဲ့အတူ ချိန်ခွင်လျှာ မညီမျှမှုတွေလည်း ရှိနေတယ်လို့ IMF ရဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ရာမှာ သတိပေးထားတာပါ။ အထူးသဖြင့်ကတော့ စီးပွားရေး တောင့်တင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ အင်အားကောင်းလာနေဆဲ နိုင်ငံတွေကြား ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းဟာ သိသိသာသာ ကွာဟချက်တွေ ရှိနေတာလို့ IMF ရဲ့ စီးပွားရေး သုတေသနအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး အိုလီဗီယာ ဘလန်ရ်ှဒ် (Olivier Blanchard) က ပြောပါတယ်။
၂၀၁၁ နဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွေမှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပျမ်းမျှဖွံ့ဖြိုးမှု ပမာဏဟာ အသင့်အတင့်လို့ ဆိုရမယ့် ၄.၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပေမဲ့ တိုးတက်မှုတွေကိုတော့ အာရှဒေသက စီးပွားရေး အင်အားကောင်း လာနေတဲ့ နိုင်ငံတွေက အဓိက ဦးဆောင်နေတာလို့ သူက ပြောပါတယ်။
“ဒါပေမဲ့လည်း အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ စီးပွားရေးမှာ ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဒီ ၂ နှစ် စလုံးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းက ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတာပါ။ စီးပွားရေး အင်အားကောင်း လာနေတဲ့နိုင်ငံတွေ၊ တိုးတက်လာနေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ၂ နှစ်စလုံးမှာ ၆. ၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိမယ်လို့ ကျနော်တို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။”
ဒီလိုကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ တိုးတက်မှုတွေ မြင်နေရပြီး၊ ဆိုးဆိုးရွားရွား အန္တာရာယ်မျိုး မရှိဘူး ဆိုပေမဲ့လည်း စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေတွေကတော့ ရှိနေတုန်းပဲလို့ IMF က ပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ အသုံးစားရိတ် ကိစ္စတွေ၊ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာတွေလို စိမ်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေတာပါ။ ဥရောပက အစိုးရတွေရဲ့ ကြွေးမြီပြဿနာတွေ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုလို စီးပွားရေး အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း မြင့်မားနေပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း ကျဆင်းနေတာတွေ၊ စီးပွားရေး အင်အားကောင်းလာနေတဲ့ တရုတ်ပြည်လို နိုင်ငံတွေမှာ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှု အန္တာရာယ် စိမ်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေတာကိုလည်း IMF က သတိပေးထားပါတယ်။
ဒီလို အခြေအနေမှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးလာနေတဲ့ နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ အတိုးနှုန်းတွေ လျှော့ချတာမျိုးက ဘဏ္ဍာရေး အသုံးစားရိတ်ကို ညှိနှိုင်းရာမှာ ပိုပြီး လွယ်ကူစေနိုင်သလို၊ စီးပွားရေးမှာ ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေက အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပိုပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေမှာ ကြီးကြပ်မှုတွေကို ပြန်ပြောင်း သုံးသပ်ဖို့တွေ လိုမယ်လို့လည်း အကြံပြုပါတယ်။
“ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ရဲ့ အခြေအနေက အခုထိ မကောင်းသေးဘူး ဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ်။ နေရာဒေသပေါ် မူတည်နေပေမဲ့ ဥရောပမှာ ရေတိုအနေနဲ့ လုပ်သွားရမယ့် ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိနေသလို၊ ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ထဲမှာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေကို ကာလအတန်ကြာအထိ နေရာတိုင်းမှာ လုပ်သွားရာမှာပါ။ ကျနော်တို့ ရုန်းထွက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို မရောက်သေးဘူးလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။”
လတ်တလော စားသုံးကုန်နဲ့ လောင်စာဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှု ပြဿနာဟာလည်း စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို ထိခိုက်နိုင်လောက်တဲ့အထိ မဟုတ်ပေမဲ့လည်း စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးလာနေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လူမှုရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေ အပါအ၀င် အန္တာရာယ် ကြုံရနိုင်တဲ့ အလားအလာတွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း IMF က သတိပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အာရှတိုက်က နိုင်ငံအများစုရဲ့ စီးပွားရေးဟာ ပြည်ပပို့ကုန် လုပ်ငန်းတွေ၊ ပြည်တွင်း ၀ယ်ယူသုံးစွဲမှုတွေလို နေရာတွေမှာ ပိုပြီးကြီးထွားလာနေတာနဲ့အမျှ ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာလည်း အရှိန်အဟုန် ကောင်းလာနေတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြခဲ့တာပါ။
နိုင်ငံပိုင် အဖြစ်ကနေ ပုဂ္ဂလိကပိုင် လုပ်ငန်းတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲလာနေတာ၊ မိသားစုဝင်ငွေတွေ တိုးလာစေရေး အစိုးရရဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့ အကြွေးသုံးစနစ် ကြီးထွားလာတာတွေကြောင့် ၀ယ်ယူစားသုံးမှုတွေလည်း တိုးလာနေတာတွေက ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေရဲ့ အခြေခံတွေ အဖြစ်နဲ့လည်း IMF အဖွဲ့က စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေက မြင်ပါတယ်။ ဒီအထဲကမှ အာရှတိုက်က စီးပွားရေးအင်အား အကြီးဆုံးလည်းဖြစ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံထက် ကျော်လွန်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ဒုတိယနေရာကို ရောက်လာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက အခြေအနေတွေက ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ IMF က စီးပွားရေးပညာရှင် အဗ္ဗဒူလ် အဘီယဒ် (Abdul Abiad) က ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ရာမှာ ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီနှစ်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ ၉.၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်လို့ ကျနော်တို့ တွက်ဆထားပါတယ်။ ဒါကအရင်နှစ်က ၁၀.၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့တာထက် နည်းနည်းလောက် လျော့သွားတာပါ။ ပြည်သူပိုင် ကဏ္ဍကနေ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် လွှဲပြောင်းပေးမှုတွေရဲ့ တွန်းအားတွေကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဟာလည်း ဆက်ပြီးအားကောင်းနေလိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ရပါတယ်။”
အာရှဒေသမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဟာလည်း ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းတွေ မကြုံရမီ အဆင့်လောက်အထိ ပြန်ရောက် လာနေပြီလို့လည်း IMF က ပြောပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ စီးပွားရေး အင်အားကြီးနိုင်ငံတခု ဖြစ်သလို၊ ဒေသတွင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေတွေဟာ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တုန်းက ပြင်းထန်တဲ့ ငလျင်နဲ့ ဆူနာမီရေလှိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် မရေမရာ အခြေအနေတွေကို ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုခဲ့တာပါ။ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဟာ ပျမ်းမျှ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏရဲ့ ၃ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိမယ်လို့လည်း အစိုးရက ခန့်မှန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအကြီးအကျယ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ ရှိခဲ့သလို၊ နောက်ဆက်တွဲ နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ပျက်စီးရာက ပြဿနာတွေ ကြုံလာရတဲ့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ စီးပွားကုန်သွယ်ဘက် တိုင်းပြည်တွေမှာ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်သံတွေလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။
အာရှတိုက်က စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်တခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ဒီနှစ်နဲ့ ရှေ့လာမယ့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုပမာဏဟာ ၅.၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိမယ်လို့ IMF က ခန့်မှန်းပါတယ်။ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုတွေလို ၀င်ငွေ ရပေါက်ရလမ်းတွေ ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲ အနှုတ် ၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေရာကနေ၊ ဒီနှစ်ထဲ အနှုတ် ၃.၅ ရာခိုင်နှုန်း နောက်နှစ်မှာ အနှုတ် ၄.၅ ရာခိုင်နှုန်း အထိရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပေမဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ကြရင်တော့ ၅. ၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တက်လာမယ်လို့လည်း IMF ရဲ့ အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း တင်ပြရင်းနဲ့ပဲ ဒီတပတ်ရဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍကို ရပ်နားပါရစေ။